सन्दीप लामिछानेलाई खेलाए दिल्ली बलियो ! | NepalDut
सन्दीप लामिछानेलाई खेलाए दिल्ली बलियो !
इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) को दोस्रो क्वालिफायरमा आज शुक्रबार राति डिफेन्डिङ च्याम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स र पहिलो पटक प्लेअफको कुनै खेल जितेको दिल्ली क्यापिटल्स भिड्दैछन्।
उता दिल्लीको टोली भने यूवा केन्द्रीत छ। दिल्लीका ब्याटिङ लाइनअपमा सम्भवत: भारतीय राष्ट्रिय टोलीको आगामी दशकका तीन मुख्य खेलाडी हुनेछन्। ओपनर पृथ्वी शअ भर्खर १९ वर्षका भए। विकेटकिपर ब्याट्सम्यान ऋषभ पन्त २१ र कप्तान श्रेयस अएर २४ वर्षमात्र छन्।
यसपटक सनराइजर्स हैदरावादबाट तीन खेलाडीको बदलामा ल्याएका भारतीय राष्ट्रिय टोलीका ओपनर शिखर धवनले दिल्लीको यूवा जोशमा अनुभवको रङ भरिरहेका छन्। दिल्ली ब्याटिङमा मात्र नभएर बलिङमा समेत कगिसो रवादाको यूवा जोशको भरमा प्लेअफसम्म आइपुगेको हो।
घरेलु मैदानमा स्पिनमा मद्दत गर्ने पिच बनाएर विपक्षीलाई हराउन पल्केको चेन्नईलाई आजको मैदानमा समेत फाइदा हुनेछ। सीमित ओभरका खेलमा स्पिनरको प्रयोग गर्न सम्भवत: इतिहासकै सबैभन्दा माहिर कप्तान धोनीले २०१५ पछि मुम्बईबाहेक कुनै टोलीसँग पनि चेन्नईमा हारेको छैन।
आजको खेलमा पनि धोनीले अनुभवी स्पिनर दक्षिण अफ्रिकाका इमरान ताहिर, भारतका हरभजन सिंह र रवीन्द्र जडेजाको स्पिनको जालोमा दिल्लीका यूवा ब्याट्सम्यानलाई पार्ने रणनीति बनाउने छन्। चोटका कारण प्रतियोगिताबाट बाहिर भइसकेका सर्वाधिक विकेट लिने रवादालाई उछिन्ने मौका ताहिरलाई हुनेछ।
चोटका कारण १२ खेलमात्र खेलेका रवादाले अहिलेसम्म २५ विकेट लिएका छन् भने ताहिरले १५ खेलमा २३ विकेट हात पारेका छन्।
२०११को विश्वकप जितेपछि भारतीय टोलीबाट हरभजनलाई चेन्नईका यूवा स्पिनर रविचन्द्रन अश्विनद्वारा विस्थापन गराएका धोनीले गत सिजन अक्सनमा हरभजनलाई किन्दा नै धेरै जना आश्चार्यमा परेका थिए। पछि हरभजनको स्पिनको उपयोग गर्दै चेन्नईले उपाधि चुम्यो। यसपालि पनि धोनीले चेन्नईमा खेलिएका ८ मध्ये ७ खेलमा र हरभजनलाई खेलाएका छन्।
हरभजन ९ खेलमा १४ विकेट लिएर धोनीको विश्वासमा खरो उत्रिएका छन्। उनले चेन्नईमा सात आज पनि स्पिनरलाई मद्दत गर्ने पिचमा हरभजन खेल्ने सम्भावना बलियो छ।
आजको खेलमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई खेलाए दिल्लीको टिम झन् बलियो हुनेछ। चेन्नईमा लिग चरणको तेह्रौं खेलमा सन्दीपलाई नखेलाएकै कारण दिल्ली शीर्ष दुईमा नपुगेको भन्ने धेरै छन्।
स्पिनरलाई मद्दत गर्ने पिचमा २ जनामात्र स्पिनर खेलाएको दिल्लीविरूद्ध चेन्नईले १७९ रन बनाएको थियो। चेन्नईका तीन स्पिनरले कसिलो बलिङ गरेर दिल्लीलाई ९९ रनमै रोकेकाले दिल्ली बराबर खेल जिते पनि रनरेटका आधारमा अंकतालिकामा तेस्रो हुन पुग्यो।